Ubuncinane kunye noMbindi 1BDR Apt. @ Abu Tig Marina - I-Airbnb
Ubuncinane kunye noMbindi 1BDR Apt. @ Abu Tig Marina
Eli gumbi lincinci lokulala li-1 likwindawo yaseGouna eyaziwayo e-Abu Tig Marina kwaye ilawulwa yi-Xuru Stays
Eli gumbi lokulala licocekile li-1 libekwe eGouna's Abu Tig Marina.
Le ndlu ikumgangatho wesithathu kwaye ineplani evulekileyo enekhitshi, igumbi lokuhlambela eli-1 kunye negumbi lokuhlala elinebhedi yesofa kwigumbi lokulala elingalala ukuya kwiindwendwe ezi-2 ezongezelelweyo.
Ikwane-intshi engama-55 ye-smart TV ene-Airplay kunye netshaneli zentambo, umatshini wokuhlamba, umatshini we-Nespresso, iketile kunye ne-microwave. Indawo yokuhlala ilungele izibini kunye neentsapho ezincinci.
Indawo esembindini kakhulu, ithule kwaye incinci, nangona kunjalo ixhotyiswe ngokupheleleyo ukuze ikwazi ukuhlalisa iindwendwe.
E-Xuru Stays, sizimisele ukunika iindwendwe zethu ububele obumangalisayo obuzifaneleyo.
-Marina El Gouna yindawo esembindini eneendawo zokutyela ezininzi, imivalo kunye neevenkile.
-'Ngexesha' ivenkile enkulu iphambi kwendawo yokuhlala ukuya ngaseMarina.
Izimvo eziyi-1 521
Siyavuya kakhulu ukuphendula yonke imibuzo yakho 24/7. Iindwendwe zinokuthumela imiyalezo kwaye zifowune nangaliphi na ixesha xa zifuna uncedo kwaye iqela lethu liya kuba lapho malunga nemizuzu engama-30 ukusombulula nawuphi na umcimbi kwangoko.
Siyavuya kakhulu ukuphendula yonke imibuzo yakho 24/7. Iindwendwe zinokuthumela imiyalezo kwaye zifowune nangaliphi na ixesha xa zifuna uncedo kwaye iqela lethu liya kuba lapho mal…